> Resource> DVD> Windows DVD Onye kere-adịghị arụ ọrụ? Nweta ngwọta ebe a
Windows DVD Onye kere-adịghị arụ ọrụ na kọmputa gị? Ọfọn, nsogbu a ga-erukwa dị iche iche ikpe. Ọ bụ ike ka i chepụta nke ọnọdụ ị okosobode na chọta ezi ngwọta idozi ya. N'ihi na "Windows DVD Onye kere bụghị na-ere ọkụ" nsogbu, m na-atụ aro bụ gbanwee ọzọ DVD-ere ọkụ ngwá ọrụ, bụ nke na-mgbari. Dị nnọọ echefu "Wondows DVD Onye kere akwụsị ịrụ ọrụ."
Wondershare DVD Onye Okike bụ nhọrọ kasị mma maka gị. Ọ na-arụ ọrụ mgbe niile stably. Na ọbụna na ọ na-arụ ọrụ ndị ọzọ dị ike. Dị ka anyị maara, Windows DVD Onye kere anaghị akwado a otutu video formats, sịnụ, MKV, MOV, VOB, ọbụna a akụkụ nke MP4 na AVI wdg Ya mere, m ike ikwu na Wondershare DVD Creator dị ka gị naanị DVD burner, n'ihi na ọ na-ahapụ gị ọkụ fọrọ nke nta ọ bụla video ka DVD. Ihe bụ ihe ọzọ, ọ dị nnọọ na-ewe gị atọ mfe nzọụkwụ maka eke a ọkachamara DVD diski. (Cheta na: Ọ na-akwado ndị niile na-ewu ewu recordable DVD diski ụdị.)
Ị ka na-esifịna site "Wondows DVD Onye kere-adịghị arụ ọrụ" nsogbu? The ngwọta ẹkenam ke isiokwu a ga-ewepụ nsogbu gị juputara. Dị nnọọ na-eche free ọkụ gị vidiyo ma ọ bụ ihe nkiri na DVD.
1 mbubata gị videos a oké DVD burner
Iji tinye video faịlụ, ị ma see-acha anụnụ anụnụ gburugburu button na isi menu na-ahọrọ "Tinye Files" nhọrọ si submenu, ma ọ bụ na a na ngwa ekpe ebi ndụ, pịa "+ Import" button. Alternatively, ịdọrọ na dobe gị obodo video faịlụ ka ya ekpe ebi ndụ kama.
Cheta na: re-ndokwa ndị a kwukwara video faịlụ, dị nnọọ pịa "↑" ma ọ bụ "↓" nhọrọ na ala nke a window. Ọ bụrụ na mkpa, ị nwekwara ike see "Tinye aha" button ịgbakwunye aha ọhụrụ.
Atụmatụ: Nke a na-eji ngwa awade ọrụ a wuru na-video nchịkọta akụkọ. Ọ ga oké aka maka ndị na-achọ bee, akuku, bugharia videos, ịgbanwe video ìhè / iche / satuation / olu, ma ọ bụ tinye watermark / sobtaitel wdg tupu DVD na-enwu.
2 Mee a DVD menu
Na menu window, ị nwere ike họrọ otu onye si ọtụtụ nke DVD menu ndebiri na a na ngwa ma ọ bụ ndị ọzọ DVD menu ndebiri online. Mgbe ahụ, a na-ahọrọ DVD menu template, ị nwere ike hazie a ahaziri DVD menu nanị site agbakwunye buttons, ederede, oyiyi, ma ọ bụ n'okirikiri wdg Mgbe ahụ, ịhụchalụ gị projecct na Preview window.
3 Ọkụ vidiyo na DVD
Mgbe ị na-eme n'aka mmepụta mmetụta bụ ok, ị dị nnọọ fanye a ide DVD diski na-amalite na-ere ọkụ gị DVD. Gaa na apa ọkụ window, ebe ị mkpa tinye akara "Ọkụ ka diski" nhọrọ na see "Ọkụ" button na ala nri akuku. Ugbu a, a ngwa ga-eme ndị ọzọ ihe unu. A nkeji ole na ole ka e mesịrị, ọkụ usoro ga-okokụre. Ma i nwere ike na-enwe a writen DVD diski kpam kpam.
Ọ bụ nnọọ mfe, ọ bụghị ya? Ya mere, ọ bụrụ na Windows DVD Onye kere agaghị ọkụ gị videos, biko egbula na-agbalị a smart Wondershare DVD Onye Okike.
Windows DVD Onye kere Ga-Ọkụ AVI? Ngwọta